सहमति लगत्तै माधव नेपाल समूहले बुझायो मन्त्री र संसदीय दलको सचेतकका लागि नाम, काे-काे छन लिस्टमा ? — Sanchar Kendra
सहमति लगत्तै माधव नेपाल समूहले बुझायो मन्त्री र संसदीय दलको सचेतकका लागि नाम, काे-काे छन लिस्टमा ?
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग सहमति भएसँगै माधवकुमार नेपाल समूहले तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पदका लागि सांसदको नाम बुझाएको छ ।
सोही अनुसार सुर्खेतमा मंगलबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री र स‌ंसदीय दलको सचेतक पद दिन तयार भएका छन् । दुई पक्षबीच सहमति जुटेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मंगलबार राखिएको छलफलमा नेता नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित रहे ।
एक नेताका अनुसार नेपाल समूहका नेता समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् पनि मंगलबार नै पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापाको नाम बुझाएको छ । संसदीय दलको सचेतकमा कर्मराज शाहीको नाम पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले एक वर्ष अगाडि नै नाम बुझाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् । अब मन्त्रिपरिषदमा नेता नेपाल पक्षका चार मन्त्री हुनेछन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका दुई मन्त्री हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वमाओवादी समूहबाट समेत मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलभित्रको कलह कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै सतहमा आउन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्यत्र पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि खुल्न थालेको छ ।
प्रदेश १ सरकारमा त्रिकोणात्मक द्वन्द्व छ । पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादीबीच वैचारिक द्वन्द्व हो । पूर्वमाओवादी पक्षले सहमति गरेअनुसार सरकारमा हिस्सा पाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो माग सम्बोधन नगिरिँदा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको टिप्पणी उनीहरूबाट हुने गरेको छ ।
प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरोज कोइरालालाई एकलौटी नियुक्ति गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू मोर्चाबन्दीमै उत्रिएका थिए । दोस्रो, मुख्यमन्त्री राईभन्दा पार्टी राजनीतिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की जेठो र कार्कीभन्दा पनि सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे वरिष्ठ रहेको तर सरकारमा प्रोटोकल ठीक विपरीत हुँदा पनि कटुता उत्पन्न हुने गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी हरेक सूचना त्यही मन्त्रालयबाट एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने हो तर राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पत्रकारहरूलाई राखेर कोरोना डेस्क खडा गरेका छन् । जाति र समुदायिक भावनामा सांसदहरू बाँडिएकाले पनि समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन् ।
तेस्रो, मुख्यमन्त्री राई स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता भीम आचार्यलाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता भएका हुन् । त्यही बेलादेखि आचार्य पक्ष असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री राई सांसदहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनकै लागि कोरोना महामारीले बजेट संकट भएकै बेला पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएका थिए ।
सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलको गत असार १९ मा बसेको बैठकमा नेपाल निकट र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको र बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलको संयोजकत्वमा केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ र रत्न ढकाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले भदौ २४ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेको छ । ‘बजेटमा भएको गल्तीकमजोरी सच्याउन र सन्तुलित योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ,’ कार्यदलका सदस्य ढकालले भने । सरकारको समीक्षा गर्ने समय आइसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘कर्णालीको प्रभाव हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । सरकारको कामकारबाही र प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार गुम्दै गएको अवस्थामा समीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेल निकट मानिने सांसद दीपक निरौलाले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री पाँच वर्षका लागि हुनुभएको हो तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको विषय पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । त्यसकारण मन्त्री फेरिन सक्छ तर मुख्यमन्त्री तत्काल फेरिन्न ।’
प्रदेशसभाका १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन अवस्थामा एमाले एकल बहुमत थियो । प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादीको २३ सिट छ । हाल मुख्यमन्त्री पौडेललाई पूर्वमाओवादी पक्षको साथ छ । हाल माओवादीले आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि उक्त स्थान आफूहरूलाई नदिएपछि पूर्वमाओवादी पक्ष चिढिएको छ । ‘माओवादी पक्षधर जता ढल्किन्छन्, त्यतै पल्लाभारी हुन्छ,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले थपे ।
केन्द्रीय नेतृत्वमै प्रभाव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा विवादरहित छैनन् । पोखरेल एक साता अघिसम्म दुई विषयबाट आलोचित भइरहन्थे । अहिले आलोचनाको विषय खुम्चिएर एउटैमा झरेको छ । लामो समयसम्म नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेकामा विरोधकै बीच गत साता नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र तोकियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि उनले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति पोखरेलको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यसमा केही नेता असन्तुष्ट छन् । यस विषयमा पार्टीको प्रदेश कमिटीमा छलफल पनि हुने गरेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ ।
नेकपाले छलफलका लागि ‘कार्यालय टिम’ बनाएको छ । त्यही टिममा छलफल हुने र त्यसको नेतृत्व पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै गरेकाले सरकारको समीक्षा र आलोचना हुँदैन । मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश इन्चार्जसमेत भएकैले उनका विषयमा कोही पनि नेता खुलेर विरोध गर्न वा उनको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्न सक्दैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उठ्ने गरेको थियो । मुख्यमन्त्री आफैँले हेर्ने भन्दा अरूलाई तोक्दा अन्य मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सहज हुने तर्क मन्त्रीहरूकै छ तर त्यसमा मुख्यमन्त्रीले जबाफ पनि नदिने र चासो पनि नराख्ने गरेको पूर्वएमाले तर्फका एक मन्त्रीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट तीन र पूर्वमाओवादीबाट दुई मन्त्री छन् ।
अहिले स्थायी राजधानी कायम गर्ने क्रममा सहमति जुटाउन वा विरोध नगर्न पनि त्यही मन्त्रालयले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको रूपन्देहीकै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले बताए । त्यसले साबिक लुम्बिनी अञ्चलका रूपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रलोभनमा राखेको उनको दाबी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, दाङका रेवतीरमण शर्मा र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यको नाम आउने गरेको थियो ।
नाम र राजधानीको टुंगो लागेपछि रूपन्देहीबाट निर्वाचित एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको पनि त्यही मन्त्रालयमै नाम जोडिएको छ तर ढकालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ढकालका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल अन्य ६ प्रदेशले माग गरे जस्तै प्रदेशका मन्त्रालय टुक्य्राएर मात्र पूर्णता दिने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनी केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । त्यसले पार्टी र संसदीय दलमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘समस्या अन्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको एउटै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही प्याकेजभित्रै छ ।’
योजना र नीतिनिर्माणमा मुख्यमन्त्रीको दक्खल र क्षमताका कारण पनि अर्को अर्थमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको ढकालले बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्य्राएर भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण टुक्य्राएर उद्योग, वाणिज्य, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय बनाउने छलफल अघि बढाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलेरै लबिइङ सुरु नभए पनि आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदत्याग गरी अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवाज भित्रभित्रै उठाउन थालेका छन् । ‘पार्टीको उच्च नेतृत्वले समयमै ध्यान दिन सकेन भने कर्णालीको जस्तो अवस्था यहाँ पनि आउन सक्छ,’ प्रदेश सांसद तथा नेकपा कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले भने, ‘आधा कार्यकाल बितिसकेको छ, अरूलाई पालो दिन ढिलो भएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको भनेर जनस्तरमा व्यापक गुनासो बढेको बताए । सरकार परिवर्तन गरेर अरूलाई अवसर दिने कुरामा बहुमत सदस्य एकमत रहेको उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्रीकै तत्कालीन दल माओवादीतर्फका सांसद पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रदेश सरकारका काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘तर सत्तासमीकरणका खेलमा मुख्यमन्त्रीलाई खतरा देखिँदैन,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले भने, ‘नेकपामा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने भनेको भीम रावल र लेखराज भट्टले हो, त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला रावल र भट्ट एकै ठाउँमा थिए, अहिले मुख्यमन्त्री प्रचण्ड नजिक छन् र रावल पनि उतै भएकाले मुख्यमन्त्री बलिया छन् ।’